Ungakunqoba Kanjani Isehlukaniso Esibuhlungu | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 11/10/2021 22:37 | Ubudlelwano
Isehlukaniso singafana nokufa futhi, Kufanele uhambe ngenqubo yokudabuka ukuze unqobe inkinga enjalo. Kungukuvalelisa kokugcina empilweni yamaphupho nekusasa nomuntu omthandayo. Yingakho isehlukaniso singaba ukuhlukumezeka kwangempela kubantu abaningi.
Esihlokweni esilandelayo sizokutshela ukuthi ungalunqoba kanjani usizi lokwehlukanisa kanye nokukwazi ukuqala impilo entsha ngale ndlela.
Kufanele uqale esisekelweni, ukuthi azikho izehlukaniso ezimbili ezifanayo futhi izizathu zingaba ziningi futhi ziyehluka. Endabeni yokwenza isinqumo esinzima kangako, kuhle ukulandela uchungechunge lwezeluleko ezenza inqubo yokuhlukana nomuntu obathandayo ibekezeleleke kakhulu:
Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu ukwamukela isehlukaniso. Kuyinto ejwayelekile futhi ejwayelekile ukuthi kubiza ekuqaleni, ngoba kusho ukuyeka amaphupho nezinhlelo ezingeke zisenziwa. Uma izinto zingenakulungiswa, akusizi ngalutho ukwamukela iqiniso. Yize kungaba nzima futhi kuhlukumeze, kungcono ukwamukela isehlukaniso hhayi ukwenza izinto zibe nzima ngokwengeziwe.
Umuntu akufanele azihlukanise futhi azame ukwakha kabusha impilo yakhe. Njengoba ubhekene nezikhathi ezinzima kangaka, kungakuhle ukuthi uzungeze abantu osondelene nabo ukukwazi ukuveza imizwa nemizwa eyehlukene.
Yize kungenzeka kungenzeki, kubalulekile ukubheka phambili futhi bona impilo ngethemba elikhulu kakhulu. Njengoba isikhathi sihamba, amaphupho amasha nezinhlelo zizovela noma ngabe othandekayo akasekho.
Kuhle ukufunda emaphutheni enziwe ukuze ujabulele impilo futhi. Isipiliyoni siyizinga futhi kufanele uthole ohlangothini oluhle ngesehlukaniso.
Ukuze ujabule awudingi ukuba nomlingani ozokwabelana naye ngomuzwa onjalo. Kufanele wazi ukuthi ungafunda kanjani ukuba wedwa futhi unganciki komunye umuntu uma kuziwa ekutholeni injabulo.
Uma naphezu kwakho konke lokhu okushiwoyo, awukasinqobi isehlukaniso, akuwona umqondo omubi ukufuna usizo kochwepheshe. Umuntu ofana nodokotela bengqondo angakusiza ukuphatha imizwa ehlukile. Ngesikhathi sokukwazi ukunqoba umzuzwana onzima njengesehlukaniso sothandekayo, kubalulekile ukwazi ukuthi ungayihambisa kanjani imizwa ehlukene ngaso sonke isikhathi.
Ngamafuphi, Akulula noma kulula ukudlulisa isehlukaniso somuntu othandana naye. Kubalulekile ukwazi isizathu sokuthi kungani ubudlelwano buhlukana futhi kusuka lapha kuqhubeke, yenza konke okusemandleni ukuze inqubo yosizi ingathathi isikhathi eside kakhulu. Kunabantu abaningi abaphenduka isehlukaniso sibe yisihlungu sangempela okunzima ukuphuma kuso. Kwezinye izimo, umuntu akakwazi ukunqoba isehlukaniso eyedwa futhi baphoqeleka ukuthi bafune usizo kochwepheshe ukuze babasize banqobe umzuzu onzima njengokuhlukana nomlingani wabo unomphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Ungadlula kanjani esehlukanisweni esibuhlungu